तीज संस्कृतिमा विकृति किन ? – Himshikharnews.com
तीज संस्कृतिमा विकृति किन ?
६ भाद्र २०७६, शुक्रबार २३:२७
तीज पर्व नेपाली चेलिबेटीहरुको महत्वपूर्ण चार्ड हो । तीज एउटा नारीहरुको हकहितका दुःख सुखका कथा व्यथा पोख्ने एउटा उद्गम थलोको रुपमा मान्नु पर्छ । तीज पर्व ऐतिहासिक परम्परा हो । यो समाज र संस्कृतिको पक्षमा चलनचल्तीमा आएको पर्व हो । विगत र वर्तमान स्थितिमा चेलीहरुको आमूल परिवर्तन भएको हामी आफँै पनि अनुभव गर्न सकेका छौँ । नारी अहिले आफै स्वाबलम्बी भइ बाँच्न र समाजलाई बचाउन सक्ने भएकी छे । नारीमा शक्तिको खानी छ । तर परापूर्वक कालमा त्यो शक्तिलाई समाजले रोकेको थियो ।
विभिन्न अन्धविश्वासको लाञ्छना लगाएर नारीलाई तिरस्कृत गरी नै रहन्थे । किनकी नारीहरुमा शिक्षा जस्तो अमूल्य चिज नै दिनलाई यो समाजले बञ्चित गरिदिन्थ्यो र नारीलाई हरेक कुरामा अन्धकारमा नै बिताउन बाध्य बनाइदिन्थे । शिक्षाको ज्योति लिन जाँदा नै नारीलाई छोरी पढायो भने बोक्सी हुन्छन भन्ने जस्ता अन्धविश्वासलाई अन्धभक्तहरुले भुक्ने गर्थे र नारीलाई केही कुराको नै ज्ञान दिन चहादैनन्थे । हो यस्तै विभिन्न समस्याहरुलाई उखेल्नकै लागि धेरै नै ज्यानको बली चढाउँनु भएको छ, उहाँहरुप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । उहाँहरुकै योगदानले गर्दा नै आजका दिनमा नारीहरु पनि पुरुषसम्मान हकहितका निम्ति कुराहरु उठाएर आफ्नो हकहितका निम्ति आफ्नो आवाज उठाउन सक्ने र उठाइएका विषय बस्तुहरुलाई ध्यानमा दिई कार्यान्वयन हुने कानूनको समेत व्यवस्था गरिएको छ । हो यस्तै विभिन्न किसिमका बाधाअड्चनहरुका विच नारीहरुले आफ्ना संस्कारहरुको जगेर्ना गरी रहेको पाइन्छ । संस्कार र संस्कृतिको खानी नारीहरु नै हुन् । किनकी नारीहरुलाई नै विभिन्न देवीहरुको स्वरुपमा नामाकरण पनि गरिएका छन् । जस्तै, सरस्वती, दुर्गा, काली आदि । यस्तै देवीहरुको नाम पनि नारीहरुकै नामबाट प्रख्यात छन् । त्यसैले त देवताको स्वरुप नारी हुन् । त्यसैले नै नारीहरुले विभिन्न चार्डपर्वहरुलाई आ–आफ्नै विधि अनुसार मनाउने चलन छ । त्यस्तै, नारीहरुको महान चार्ड हरितालिका तीज हो । यो विगतदेखि वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा धेरै नै तौरतरिकाबाट मनाइएको अवगत छ ।
समय परिवर्तनशील छ, त्यसैले हरेक संस्कार संस्कृतिहरुमा पनि परिवर्तन आएको छ । तर संस्कृतिको नाममा विकृति हामीले भित्र्याउन मिल्दैन । विगतका वर्षहरुमा एकाएक संस्कारहरुका विकृतिहरु भित्रिरहेका छन् । त्यो स्वयम् आफ्नै जीवनशैलीको कारणले पनि हो । अरुका देखासिकी नै मुख्य कारण हो । अहिले प्रशासनले पनि तीजलाई विभिन्न पार्टी प्यालेसमा मनाउन मनाही गरेको छ । यो कार्य सरकार र सरोकार पक्षलाई त राम्रो नै भएको छ होला, तर महिलाहरुको हकहितका निम्ति आवाज उठाउने नारीहरुका प्रतिनिधिज्यूहरु आजका दिनमा कहाँ हुनुहुन्छ ? यो त महिलाहरुका निम्ति त अन्याय हो नि त । किन मौन ? किनकी नारीहरु पनि यो परिवर्तित समाजमा नै बसोवास गर्ने मानव हुन् । यहाँ विभिन्न राजनैतिक दल वा अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरु चाहीँ पाँचतारे होटल र त्यति मात्रै कहाँ होर विदेशमा नै विभिन्न कार्यक्रम पटक पटक गर्दा चाहीँ प्रशासन पनि मौन बस्ने तर आज वर्ष दिनमा एक पटक आउने नारीले विशेष मनाउने पर्वलाई चाहीँ कतै विभिन्न पार्टी प्यालेसमा मनाउँदा आज बडो सरकार र सरोकारवालाहरुलाई आश्चर्य लागेको छ । नारीहरु पनि परिवर्तित समाज र संस्कृतिलाई नै जगेर्ना गर्नकै निम्ति तीज मनाउने गर्दछन् । यहाँ तीज पर्वलाई विकृति ल्याउने खालका काम गर्ने बडो तडकभडक गर्ने पनि छन नि । त्यस्तालाई चाहीँ कारवाही छैन मौन बस्छन् । आजका महिला शिक्षित छन् र पुरुष सम्मान कार्य गरिरहेका छन् । पहिला पो शिक्षा दिदैनथे र घर बाहिर निष्कन पनि धेरै बञ्चित थियो र बल्ल बल्ल तीज आउँथ्यो र माइत जान धेरै नै रहर हुन्थ्यो । सञ्चारको माध्याम केही पनि थिएन, तीज कहिले आउँछ र माइत जाउ भन्ने सोच हुन्थ्यो । आमाले बनाएको मीठोमसिनो खाऊ भन्ने आशा लाग्थ्यो । पराई घरबाट हेपिएर धेरै पीडादायक जीवनयापन गरेका हुन्थे तर अब त सकेसम्म निरक्षर कहिँकतै मात्रै भेटिन्छन् । आर्थिक क्षेत्रमा पनि मजबूत भएका छन् । आज एक/दुई पैसा कमाएर खर्च गर्न सक्ने क्षमता राख्दछन् । नारीहरु पनि त्यसैको उपज नै मान्नु पर्छ । पार्टी प्यालेसमा चेलिवेटीहरुको तीज मनाउने चहलपहल बढेको छ । पार्टी प्यालेसमा तीज मनाउन बञ्चित गर्ने हैन, नारी सक्षम भएकी छे है भन्ने अर्थ लगाउनुपर्छ । त्यसैले प्रशासनिक तवरबाट पार्टी प्यालेसमा तीज मनाउन हौसला दिनुपर्छ तर तीजका नाममा हुने गरेका विभिन्न किसिमका संस्कारभित्रका विकृतिहरुलाई जरैदेखि फाल्नुपर्छ । समयअनुसार संस्कृतिलाई मनाउने गर्नुपर्छ । कुनै पनि पार्टी प्यालेसमा तीज मनाउनाले केही फरक पार्दैन तर फरक त तीज पार्टी प्यालेसमा मनाउन मनाही भन्ने जस्ता सोच भएका व्यक्तिहरुले पार्दछन् । त्यसैले अब नारीहरु सचेत हुन जरुरी देखिन्छ । किनकी अरुले जे लगायो त्यही लगाउने, जस्तै कि गरगहना, साडी जस्तामा पार्टी पिच्छे कसले के लगाएको छे भनेर प्रतिष्पर्धा हुने गरेको प्रशस्त हामी देख्न सक्छौं । यो नारीहरुका लागि हानीकारक प्रतिष्पर्धा हो काम वा सिर्जनशिलतामा प्रतिष्पर्धा गरौं न । नारीहरु एकजुट हुन आवश्यकता छ । कसको कति धन सम्पत्ति छ भन्ने हैसियत हैनकी नारीहरुको काम कर्तव्य र अधिकार कति छ भनेर काम गर्ने गरौं । अनि संस्कृति भित्रको संस्कारको सम्मान हुने गर्दछ । हरितालिका तीजको सबैलाई शुभकामना ।।